Umhlaba ungadlula u-1,5 degrees wokushisa ngo-2026 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amazinga okushisa aphakathi komhlaba angadlula ku-1,5 degrees Celsius ngaphambi kwesikhathi ebesilindelwe: ngonyaka ka-2026, njengoba kuvezwe ocwaningweni olwenziwe ososayensi abavela e-ARC Center of Excellence for Climate System Science eNyuvesi kusuka eMelbourne (Australia), futhi kwashicilelwa encwadini ethi »Geophysical Research Letters».
Uma kwenzeka, kungaba ngoba iPacific Decadal Oscillation (IPO), eyisilawuli semvelo sesimo sezulu, ngena esigabeni esihle noma esifudumele, kusheshise ukufudumala kwembulunga yonke.
1 Yini i-IPO?
2 Ngabe ihlobene nokushisa komhlaba?
Amanani anyanga zonke enkomba ye-IPO kusuka ngo-1900 kuya kuMeyi 2006.
Isithombe - Iqembu Lemithelela Yesimo Sezulu
Kuyinto a isimo sezulu sokusebenzisana phakathi komkhathi nolwandle okwenzeka phakathi kokufana okungu-50º North no-50º South of the Pacific. Inezigaba ezimbili: okuhle lapho kubhaliswa khona amazinga okushisa aphezulu, kanye nokubi. Owokuqala uvame ukuhlala phakathi konyaka ongu-1 no-5, kanti owesibili ungadlulela eminyakeni engama-40 noma ngaphezulu.
Ngabe ihlobene nokushisa komhlaba?
Eminyakeni yakamuva, kusuka ngo-2014 kuya ku-2016, kube namarekhodi okushisa akhombisa ukuthi isigaba esifudumele okuso manje singahlotshaniswa nalawa marekhodi aqoshwe. Yize kunjalo, uBen Henley, ongomunye wababhali besifundo, ukusho lokho noma ngabe kusesigabeni esingesihle, ucwaningo lwabo lukhombisa ukuthi umgoqo we-1,5ºC kungenzeka wephulwe ngo-2026.
Ukuyigwema, »ohulumeni kuzofanele basebenzise izinqubomgomo ezingagcini nje ngokunciphisa ukungcola kodwa futhi zisuse nekhabhoni emoyeniUHenley wakhomba.
Uma lokhu kungaphumelelanga, ukuncibilika kwezigxobo kuzokwenza ukuthi izinga likhuphuke, izingwadule ziyoqina kakhulu, futhi nesomiso esibi kakhulu singaba khona eningizimu-ntshonalanga ye-United States naseMexico.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Umhlaba ungadlula u-1,5 degrees ngokushisa ngo-2026
Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta ukusinda kwezinyoni ezifudukayo